40KM 40G QSFP + Vagadziri | China 40KM 40G QSFP + Fekitori & Vatengesi
Iyo HUAQ40E ndeye transceiver module yakagadzirirwa 40Km optical kutaurirana kunyorera. Iyo dhizaini inoenderana ne40GBASE-ER4 yeiyo IEEE P802.3ba standard. Iyo module inoshandura ina yekuisa nzira (ch) ye10Gb / s dhata yemagetsi kuita 4 CWDM Optical Signal, uye inowachinjisa iwo kuita imwe chiteshi ye40Gb / s Optical Transmission. Zvakapesana, padivi rekutambira, iyo module optically de-multiplexes inopinza 40Gb / s mune 4 CWDM chiteshi masaini, uye inoshandura iwo kuva 4 chiteshi kuburitsa dhata yemagetsi.
Iwo epakati ewavelengths e4 CWDM chiteshi ari 1271, 1291, 1311 uye 1331 nm senhengo dzeCWDM wavelength grid inotsanangurwa muITU-T G694.2. Iyo ine duplex LC yekubatanidza yeiyo optical interface uye 38-pini yekubatanidza yeiyo magetsi interface. Kuti kuderedze iyo yekupararira yekupararira murefu-dhonza system, imwechete-modhi fiber (SMF) inofanirwa kuiswa mune ino module.
Chigadzirwa chakagadzirwa nefomu chinhu, yemagetsi / yemagetsi kubatana uye yedhijitari yekuongorora interface maererano neQSFP Multi-Source Chibvumirano (MSA). Iyo yakagadzirirwa kusangana neyakaomesesa ekunze mamiriro ekushanda anosanganisira tembiricha, hunyoro uye EMIinterference.
Iyo module inoshanda kubva kune imwechete + 3.3V magetsi emagetsi uye LVCMOS / LVTTL epasi rese ekudzora maseru senge Module Present, Reset, Interrupt uye Low Power Mode zviripo nema module. Iyo 2-waya serial interface inowanikwa yekutumira uye kugamuchira akaomesesa ekudzora maseru uye kuwana yedhijitari yekuongorora ruzivo. Nongedzo dzega dzega dzinogona kugadziriswa uye chiteshi chisina kushandiswa chinogona kuvharwa kuti chikurumidze dhizaini dhizaini.
Ichi chigadzirwa chinoshandura iyo 4-chiteshi 10Gb / s dhata yekuisa yemagetsi muCWDM Optical Signal (mwenje), neinotyairwa 4-wavelength Distributed Feedback Laser (DFB) array. Iyo mwenje inosanganiswa nezvikamu zveMUX se40Gb / s dhata, ichipararira ichibuda kunze kwemutumira module kubva kuSMF. Iyo inogamuchira module inogamuchira iyo 40Gb / s CWDM Optical Signal Input, uye de-multiplexes iyo mu4 yega 10Gb / s channel ine akasiyana wavelength. Chiedza chega chega chevelength chinounganidzwa ne discrete avalanche photodiode (APD), uye ndokuzoburitswa sedata remagetsi mushure mekuwedzeredzwa kutanga neTIA uyezve neposvo yekuwedzeredza.
Iyo HUAQ40E yakagadzirirwa fomu fomu, yemagetsi / yemagetsi kubatana uye yedhijitari yekuongorora interface maererano neQSFP Multi-Source Chibvumirano (MSA). Iyo yakagadzirirwa kusangana neyakaomesesa ekunze mamiriro ekushanda anosanganisira tembiricha, hunyoro uye EMI kupindira. Iyo module inopa yakakura kwazvo mashandiro uye chimiro chekubatanidza, chinowanikwa kuburikidza neese maviri-waya serial interface.
Huawei Olt Mutengo, External Modulation Transmitter, Xfp Transceiver, Huawei Qsfp +, Optical Fiber Module, Sfp C ++,